ढुक्क हुनुस् ! यसकारण आज नेपालले ओमानलाई हराउँने छ ( शक्दो शेयर गरौ ) - News20 Media
February 5, 2020 February 5, 2020 N20LeaveaComment on ढुक्क हुनुस् ! यसकारण आज नेपालले ओमानलाई हराउँने छ ( शक्दो शेयर गरौ )
काठमाडौं : नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आफ्नो घरेलु भूमीमा बुधबार ऐतिहासिक क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्दैछ। परिचित प्रतिद्वन्द्वी ओमान विरुद्ध टीयु क्रिकेट मैदानमा उत्रँदै गर्दा नेपालका लागि यो प्रतियोगिता किन पनि यति धेरै अर्थपूर्ण भने पहिलो पटक नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएपछिको घरेलु मैदानमा त्रिकोणात्मक श्रृंखला खेल्न लागेको हो। त्यसैले यो एकदिवसीय प्रतियोगिता नेपालका लागि केवल एउटा खेलमात्र होइन, एक इतिहासका रुपमा समेत दर्ज हुने छ।
नेपाल र ओमानबीचको खेल बुधवार बिहान साढे नौ बजे टीयू मैदानमा शुरु हुनेछ । ओडिआई मान्यता पाएपछि नेपाल र ओमानबीच पनि यो पहिलो खेल हुनेछ । नेपाल र ओमान यसअघि ५० ओभरको खेलमा सात पटक प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जसमा नेपालले ३ खेल जित्दा ४ खेल ओमानले जितेको थियो । सन् २०१३ को डिभिजन ३ मा पछिल्लो पटक नेपालले हराएको थियो । बर्मुडामा भएको त्यो खेल नेपालले २८ रनले जितेको थियो । त्यसयता नेपाल लगातार खेलमा ओमानसँग पराजित भएको छ । यस पटक घरेलु दर्शकको अगाडि त्यो हारको बदला लिने अवसर नेपाललाई छ ।
२०१९ अगष्ट शुरु भएको लिग २ मा ओमान ८ अंकसहित अंक तालिकाको चौथो स्थानमा छ । नेपालले खेल्ने अर्को टिम अमेरिका १२ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ । दुई उत्कृष्ट टिमबीच राम्रो खेल्दै नेपाललाई सुखद शुरुवात गर्ने अवसर छ । नेपालले २०१३ यता ओमानलाई पराजित गर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि सात वर्षपछि घरेलु मैदानमा ओमानविरुद्ध जित हात पार्दै नेपाल पछिल्ला हारको बदला लिने योजनामा छ ।
उनले पछिल्लो ६ महिनादेखि ओमानले लगातार खेलिरहेको र सबैले मिहिनेत गरिरहेको बताए । ‘कडा मिहिनेत गरिरहेका छौँ । खेलाडीहरु सबै फिट छन् । आफ्नो प्रदर्शन देखाउन भोकाएका छन्,’ उनले भने । उनले नेपाली दर्शकको अगाडि खेल्दा दबाब हुने बताए । ‘म यहाँ २०१३ मा आएको थिएँ । नेपाली फ्यान मैदानमा धेरै हुन्छन् । मलाई थाहा छ कस्तो दबाब हुन्छ भनेर । उनीहरु चियरिङ गर्छन् त्यसले हामीलाई पनि बुस्ट गर्छ,’ मक्सुदले भने । २०१३ मा नेपालमा भएको एसीसी टी-२० कप खेल्न ओमान नेपाल आएको थियो । तर मैदानमा नेपाल र ओमानको भेट भने भएन ।